क्लिन फिड नीति : के हाे ? कसरी हुन्छ नेपाललाई नाफा ? | mulkhabar.com
June 28, 2019 | 6:16 am 38 Hits
-लक्ष्मण हुमागाईँ –
सामाजिक सञ्जाल सामयिक जनमत बुझ्ने सशक्त माध्यम बन्दै गएको छ । विश्वभर देखिएको यो लहरबाट नेपाल अछुतो छैन । असारको ९ र १० गतेको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र नियाल्ने हो भने सरकारले ल्याएको विज्ञापनरहित नीति (क्लिन फिड) को पक्षमा ठूलो जनमत प्राप्त भयो ।
इन्टरनेट तथा डिजिटल टीभी समन्वय समितिले विज्ञापनसहितका च्यानलको २४ घन्टा प्रसारण रोकेपछि त्यसको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल उभियो । यसले सरकारले ल्याएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देश गर्यो ।
धेरैले नबुझेको र चासोसमेत कम भएको नीति थियो यो । नीति मस्यौदाका समयदेखि आजसम्म पनि धेरैले यसलाई आ–आफ्नै ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण गरेको देखिन्छ । नीति मस्यौदाको एक सदस्यको नाताले यो नीति बुझाउन जति गाह्रो थियो, बुझेपछि सहज । कहिलेकाहीँ नबुझी आउने प्रतिक्रियाको डरबाट यो नीतिले मुक्ति पाएको र जनअनुमोदित हुने शौभाग्य पाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको एउटै स्पष्ट निर्देशन देखिन्छ– विज्ञापनरहित नीति लागू गर र आन्दोलनरत पक्षले विनाऔचित्य आन्दोलन नगर । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार क्षेत्रले सधैँ नकारात्मक कुरालाई मात्र बोक्छ भन्ने धारणालाई दुई दिनको घटनाले गलत साबित गरिदियो । साथै समाज सरकारले गरेका राम्रा कामको पक्षमा उभिन्छ भन्ने सन्देश पनि यो घटनाले दियो ।
यो नीतिले आर्थिक रूपमा कसलाई फाइदा वा हानि नोक्सानी गर्छ, त्यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला । यो नीतिको कार्यान्वयनबाट विज्ञापन बजार विस्तार हुने वा बढ्ने, विज्ञापन व्यवसायीलाई लाभ हुने, सञ्चारमाध्ययममा विज्ञापन वृद्धि हुँदा सञ्चार उद्यमी लाभान्वित हुने पक्षलाई नकार्न सकिँदैन ।
समाजको जुनसुकै वर्ग र व्यवसायलाई फाइदा पुगे पनि त्यो अन्ततः नेपाल र नेपालीलाई पुग्ने फाइदा हो । यस नीतिको कार्यान्वयनबाट सञ्चार उद्यमी र विज्ञापन व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने र केबल अप्रेटरले चाहिँ व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने भन्ने भ्रम पनि सिर्जना गरिएको छ ।
यो नीति मूल रूपमा हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अतिक्रमणविरुद्धमा छ । कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले विदेशीको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अतिक्रमणलाई सहनुहुँदैन र सहँदैन । नेपाली बजारमा उपलब्ध नै नभएका सामग्रीको विज्ञापन र भारत सफाइ अभियानका विज्ञापन नेपाली दर्शकका चासो र सरोकारका विषय होइनन् ।
आफ्नो देशको मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने र आफ्नो सामाजिक साँस्कृतिक परम्परा र रीतिरिवाजप्रतिको प्रेम जगाइराख्न यो नीति आवश्यक भएको हो । प्रशारण क्ष्ोत्रमा क्लिनफिड नीतिलाई जर्तीरहित सुनका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । स्वभाविक रुपमा नेपाली दर्शकले सुनकै मूल्यमा जर्ती